MyChart - Doori Qaabka Furashada
Doori Qaabka Furashada
Waxaa cillado laga helay foomka. Xalli ciladahaan oo gudbi mar labaad.
Waxaan u baahanahay macluumaad kugu saabsan si aan kuu siino akoonka MyChart. Marka aad soo gudbiso, waxay qaadan doontaa ilaa todobaad si loo diyaariyo loona xaqiijiyo. Marka la xaqiijiyo, waxaad heli doontaa iimayl ama waraaq uu la socdo koodhkaaga ka shaqaysiinta iyo tilmaamaha sida looga shaqaysiiyo akoonkaaga MyChart. Haddii aad qabto wax su`aalo ah, fadlan la xiriir goobtaada caafimaadka.
Waxay muujinaysaa goob loo baahan yahay
Waxaan u baahanahay macluumaad si aan kuu siino akoonka MyChart. Halkaan gali waxyaabaha ku saabsan dad ahaantaada talaabada xigtana waxaan xaqiijin doonaa aqoonsigaaga anaga oo isticmaalayna su`aalaha ka imaanaya hanaanka xaqiijinta ee qaybta saddexaad. Marka la xaqiijiyo, waxaad heli doontaa waraaq ama iimayl uu la socdo koodhkaaga ka shaqaysiinta iyo tilmaamaha sida looga shaqaysiiyo akoonkaaga MyChart. Haddii aad qabto wax su`aalo ah, fadlan la xiriir goobtaada caafimaadka.
Marka ugu horeysa, waxaan u bahanahay in aan aruurino macluumaad ku saabsan bukaanka. Haddii aad qabto wax su`aalo ah, fadlan la xiriir goobtaada caafimaadka.
Hadda, waxaan rabnaa in aan aruurino macluumaad adiga kugu saabsan. Marka aan helno macluumaadkaan, waxaan diyaarin doonaa balantaada. Haddii aad qabto wax su`aalo ah, fadlan la xiriir goobtaada caafimaadka.
Waxaan u baahan nahay in aan aruurino macluumaad ku saabsan bukaanka si aan balantaan u muddayno. Haddii aad qabto wax su`aalo ah, Fadlan la xiriir goobtaada caafimaadka.
Waxay muujinaysaa meel la iska rabo
Jinsiga Sharciga ah
Afarta god ee ugu danbaysa SSN
Xaqiiji ciwaanka iimaylka
Codsiga Waa la gudbiyay
Mahadsanid - codsigaaga waxaa loo diray goobta caafimaadka. Waxaad heli doontaa koodhka ka shaqaysiinta oo boostadaada kuugu soo dhacaya ama iimaylka todobaad gudihiis.
Hadii aad qabto wax su`aal ah ama haddii aadan helin koodhkaaga ka shaqaysiinta, wac qaybta adeegga macaamiisha.
Ku laabo Bogga Galitaanka
Oops!(Aaah!) Wax ayaa ka khaldan halkaan...
Waxaan wajahaynaa dhibaatooyin farsamo wakhti xaadirkaan. Fadlan hadhow isku day mar labaad ama la xiriir laynka adeegga macaamiisha si laguu caawiyo.
Waxaan wajahaynaa dhibaatooyin farsamo wakhti xaadirkaan. fadlan la xiriir laynka yaga adeegga macaamiisha si laguu caawiyo.
Waxaa jira akoon ujira qofkaan.
Markaad joogto bogga galitaanka, riix "Forgot MyChart Username?" ama "Forgot Password?" si aad u gasho akoonkaan.
Fadlan noola soo xiriir si toos ah si aad usoo ceshato galitaanka akoonkaaga.
Waxaan wajahaynaa dhibaatooyin farsamo wakhti xaadirkaan. Fadlan mar labaad isku day ama la xiriir qaybtayada adeegga macaamiisha si laguu caawiyo.
Ver en Chinese Luuqadda ugu danbaysa ee liiska kujirta